Fambolena Zavamaniry mihandrona China Manufacturer
Description:Electric Growing Tray for Plant,Fanamboarana kitapo ho an'ny fambolena,Toeram-piompiana fanangonana toaka
Home > Products > Seeding Heater System > Seedling Heater Tray > Fambolena Zavamaniry mihandrona
D esigned amin'ny fambolena zana-ketsa ao an-trano. Ny dongy plastika mazava tsara dia manampy amin'ny fijerena ny fivoaran'ny zana-kazo. 2 ny lavaka fantsakana ao amin'ny trano maizim-pito dia manampy ny fikorontanan'ny taovam-pisefoanana. Azo atao ny mamboly voninkazo, voankazo ary legioma, na aiza na aiza, na amin'izay tianao na amin'ny ririnina. Fandefasana plastika (ny fototra dia vita amin'ny ABS, ny kôlô dia vita amin'ny PET mazava, ny fanaka fanaka dia vita amin'ny PS) . Ny vokatra antsika dia natao ihany koa mba hifanaraka amin'ny fenitra CE, RoHS, Ul, ETL. Ny kalitao dia azo antoka tanteraka.
Product Categories : Seeding Heater System > Seedling Heater Tray
Fitomboan'ny hafanam-po ho an'ny fambolena an-tanety Contact Now
Seat Heat Tray Starter Kit Greenhouse Contact Now
Fampandrosoana Hevitra Hamaky Hanova Hanova ny fango Contact Now
Seething Heat Mats mora sy mahasalama hafa Contact Now
Seeding Heat PadLarge Seedling Heat MatSeed Heat Pad Contact Now
Toeram-pivarotan-tsakafo hafahafa 24 cell Contact Now
Seed Starter Kit 24 Seedling Seedling Tray Contact Now
Fofona Hafiriana Matetika PTC Heat Pad Electric Contact Now
Electric Growing Tray for Plant Fanamboarana kitapo ho an'ny fambolena Toeram-piompiana fanangonana toaka Electric Heating Mirror Pad Heating Mat for Planting Ul Heating Mat to Plant Electric Mirror Heat Pad Electrical Heating Mat